hah you for — Steemit
hah you for
အဲဒီမှာအတော်လေးရေခဲမုန့်နဲ့တူလူတိုင်းမနှစ်သက်သောရန်အနည်းငယ်နည်းလမ်းတွေရှိပါတယ်, ဒါပေမယ့်ရေခဲမုန့်ကွင်းဆက်ချိုမြိန်သညျယရှေုကိုတကယ်လူမျိုး၏တစည်းကမောက်ကမသိရသည်။ အမေရိကန်နိုင်ငံတွင်သို့ချဲ့ထွင်ထားတဲ့ကနေဒါရေခဲမုန့်ကုမ္ပဏီ, ခရစျတျောရုံကန်တော့ချွန်ပေါ်မဆိုင်သောတဦးတည်းချိုမြိန်အားရစရာဖြစ်ပါတယ်ထင်တဲ့သူခရစ်ယာန်ဘာသာယုံကြည်သူထောင်ပေါင်းများစွာ၏အကြားအငြင်းပွားဖွယ်ရာဖြစ်စေခဲ့သည်သိရသည်။
ချိုမြိန်သညျယရှေုရောနှော-ins တွေအများကြီးနှင့်အတူအလွန်ကြီးမားသော, တောက်တောက်အရောင်လောကဓာတ်တစ်မျိုးကတော့စေသည်။ မီနူးအကြားထင်မှတ်ပျော့ဖြစ်ကြ၏ hazelnuts ပြန့်ပွား, ပြောင်းဖူးအလွှာများနှင့်အကျအဆုံးများန့်ကို cookies တွေကိုနှင့်အတူထိပ်ဆုံးရရှိထားတဲ့ "Hella Nutella," နှင့်အနီရောင်ကတ္တီပါကိတ်မုန့်, ​​Raspberry ငံပြာရည်နှင့် meringue ပြိုအတွက် coated ကြွလာတော်မူသော "အနီချီဆောင်ခြင်း" နဲ့တူအရသာဝတ်ပြုကြလော့။ ဒါပေမယ့်ပါအယူခံနာမတော်ကိုအမှီ ပြု. ပေမယ့်ထုပ်ပိုးမသာနှင့်အတူပြဿနာကိုယူသူစတိုးဆိုင်ရဲ့ဝေဖန်သူများအပေါ်ဆုံးရှုံးခဲ့ရခြင်းဖြစ်သည်။ ကုမ္ပဏီ၏ခွက်ပေါ်ထောက်-Down လက်ဝါးကပ်တိုင်ကိုအနည်းငယ်ငရဲထက်ပိုမိုကြီးပြင်းခဲ့သည်။ ကျော်သည် 1100 ကလူချိုမြိန်ယရှေုက "ချက်ချင်း" ၎င်း၏အမည်ကိုပြောင်းလဲအင်္ဂါနေ့နံနက်အဖြစ်ခွက်ကနေ "အန္တိခရစ်ပုံရိပ်" ကိုဖယ်ရှားတောင်းဆိုမှ Ian O'Sullivan ခြင်းဖြင့်စတင်ခဲ့တဲ့အသနားခံစာလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်။ " အကယ်. ဒီ Ice Cream ကွင်းဆက်ကိုနောက်ကဘာလဲဆိုတာ, Sweet ယေရှု၏လှောင်ပြောင်ခြင်းနှင့်စော်ကားအမည်ဖြင့်စောင့်ရှောက်ဖို့ခွင့်ပြုသလဲ?" ဟုအဆိုပါအသနားခံစာပြည်နယ်များ။
နီးပါး 10000 CitizenGo အပေါ်အလားတူအသနားခံစာလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်။ ဒါတွေကိုချိုမြိန်သညျယရှေုရဲ့သန်နိဋ်ဌာနျဒီအတိုင်းအရည်ပျော်အောင်ဖို့လုံလောက်တဲ့ဖြစ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါကုမ္ပဏီကအမည်အားဘယ်နေရာမှာမဆိုသွားမနှင့် "လူတွေတစ်ဦးခံစား၏စကားရပ်, အံ့သြစရာသို့မဟုတ်မယုံအဖြစ်သုံးကြောင်းပေါ်ပြူလာထားသောစာပိုဒ်တိုများထံမှဖန်တီးခဲ့ရှင်းလင်းဖန်ဆင်းတော်မူ၏။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကမည်သူမဆိုရဲ့ဘာသာရေးသို့မဟုတ်ယုံကြည်ချက်စနစ်များအပေါ်ဝေဖန်သုံးသပ်ချက်ပူဇော်ဖို့မဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင်အဖွဲ့အစည်းကယဉ်ကျေးမှုနှင့်ဘာသာရေးယုံကြည်ချက်၏ကျယ်ပြန့ကိုယ်စားပြုကြောင်းအံ့သြဖွယ်လူများ၏ဖွင့်ထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ "
aelldemhar aatawlayy ray hkell mu ant nae tuu luutine m nhaitsaatsaw raan aanaeengaal naeelamtway shipartaal, darpaymaae ray hkell mu ant kwinsaat hkyao myaein s nyya y shayu ko takaal luumyoe eat t hcaee kamoutkam sirasai . aamayrikaanninengantwin shoet hkyaae htwin htarrtae kanaydar ray hkell mu ant kumpane, hk r hcya tyaww rone kaantot hkyawan paw m sinesaw t u taee hkyao myaein aarrrahcarar hpyitpartaal htain tae suu hkaraityaranbharsar yonekyi suu htaungpaunggmyarrhcwar eata kyarr aangyinnpwarrhpwalrar hpyithcay hkaesai sirasai . hkyao myaein s nyya y shayu
rawnhaaw-ins twayaamyarrkyee nhaint aatuu aalwankyeemarrsaw, tout tout aaraung lawk dharat taitmyoe katot hcaysai . me nuuakyarr htainmhaat pyawwhpyitkyaeat hazelnuts pya ant pwarr, pyaungghpuu aalwhar myarr nhaint aakyaaasonemyarr n ko cookies twayko nhaint aatuu htiutsonerashihtarrtae "Hella Nutella," nhaint aaneraung kat te par kate mu n , ​​Raspberry nganpyaarrainhaint meringue pyaoaatwat coated kyaw lar taw muusaw "ane hkyae saung hkyinn" nae tuu aarasar waatpyu kyalot . darpaymaae par aayuuhkan narmataw koaamhae pyu. paymaae htote poe m sar nhaint aatuu pyaဿnar ko yuu suu hcatoesine rae wayhpaan suu myarraapaw soneshone hkaer hkyinnhpyitsai . kumpaneeat hkwat paw htout-Down laatwarrkauttine ko aanaeengaal ng rell htaat pomo kyee pyinn hkaesai . kyawsai 1100 k luu hkyao myaein y shayuk " hkyethkyinn" ၎inneat aamaiko pyaungglell aain gar nae nannaat aahpyit hkwat kanay " aan ti hkarait poneriut" ko hpaalsharr taunggsomha Ian O'Sullivan hkyinn hpyint hcatainhkae tae aasanarrhkanhcar laatmhaatrayyhtoehkae sai . " aakaal. de Ice Cream kwinsaat ko nout k bharlellsotar, Sweet yayshu eat lhaawinpyaung hkyinn nhaint hcawkarr aamai hpyang hcawng shout hphoet hkwin pyu salell?" hu aasopar aasanarrhkanhcar pyinaalmyarr . neeparr 10000 CitizenGo aapaw aalarrtuu aasanarrhkanhcar laatmhaatrayyhtoehkae sai . dartwayko hkyao myaein s nyya y shayu rae saan nit htar nya deaatine aarai pyaw aaung hphoet lonelouttae hpyithkaesai . aasopar kumpanek aamai aarr bhaalnayrarmhar m so swarr manhaint " luutway tait u hkanhcarr eat hcakarrraut, aan sya hcarar shoetmahote mayone aahpyit sone kyaungg pawpyauular htarrsaw hcarpod to myarrhtanmha hpaantee hkae shinnlainn hpaansainn tawmuueat . kyawantawthoetrae rairwalhkyetk maisuumaso rae bharsarrayy shoetmahote yonekyihkyet hcanait myarraapaw wayhpaansonesauthkyet puujaw hphoet mahoteparbhuu . kyawanotethoeteat kopine aahpwalaahcaee k yainkyaayymhu nhaint bharsarrayy yonekyihkyet eat kyaal pya n kohcarrpyu kyaungg aan sya hpwal luu myarreat hpw int htarr hkyinnhpyitparsai . "